5 Izinto ezininzi ezibalulekileyo onokuzenza ngendalo
Imiba engqongileyo efana nokugqithisa, ukuswela kwamanzi kudinga inyathelo elibi
Ukuba uziva ungenzi okwaneleyo kwimeko yendalo ngokufaka i-bulb light incandescent kunye nezibane ze-LED kunye nokuququzelela iikhikhiti zakho, mhlawumbi ulungele ukuzinikela ngokunyanisekileyo kumphathi wobume bendalo.
Ezinye zezi zicwangciso zingabonakala zingatshatanga, kodwa ziphakathi kwezona zinto zixabisekileyo ezinokuthatha ukukhusela nokugcina indawo yendalo.
Nibalwa Abantwana-okanye Akunakho
Ukugqithiswa kweemeko ngokuqinisekileyo yinkinga ebalulekileyo yendalo engqongileyo kuba iyanciphisa bonke abanye .
Inani labantu belikhulile lisuka kwiibhiliyoni ezi-3 ngo-1959 ukuya kwiibhiliyoni ezi-6 ngo-1999, ukwanda kweepesenti ezili-100 kwiminyaka engama-40 nje kuphela. Ngokwezicwangciso zangoku, uluntu lwabantu luya kwanda ukuya kwiibhiliyoni eziyi-9 ngo-2040, izinga lokukhula ngokukhawuleza kunokuba ludlulileyo lokugqibela lwenkulungwane ye-20 kodwa enye iya kusishiya abantu abaninzi ukuba bahlale.
I-Planet yomhlaba yindlela evaliweyo enezixhobo ezincinci-kuphela amanzi amaninzi aphelileyo kunye nomoya ococekileyo , nje kuphela iihektare zomhlaba zokutya okukhulayo. Njengoko inani labantu behlabathi likhula, izibonelelo zethu kufuneka zolule ukukhonza abantu abaninzi. Ngexesha elithile, oko akusayi kuphinda kwenzeke. Ezinye izazinzulu zikholelwa ukuba sele sidlulile elo nqaku.
Ekugqibeleni, kufuneka sitshintshise lo mkhwa wokukhula ngokuzisa ngokukhawuleza inani labantu baseplanethi yethu ukuya kummandla ophezulu olawulayo. Oku kuthetha ukuba abantu abaninzi kufuneka banqume ukuba banabantwana abancinci. Oku kunokubonakala kulula kumphezulu, kodwa ukuqhuba ukuvelisa kubaluleke kuzo zonke iintlobo kwaye isigqibo sokunciphisa okanye ukuyeka amava kukuba, unenkcubeko okanye unqulo kubantu abaninzi.
Kwamazwe amaninzi athuthukayo, iintsapho ezinkulu zinokuba ngumcimbi wokusinda. Abazali kaninzi banabantwana abaninzi ngangokunokwenzeka ukuqinisekisa ukuba abanye baya kuhlala bekunceda ngokulima okanye omnye umsebenzi kunye nokunyamekela abazali xa bekhulile. Kubantu abakwizizwe ezinjengalezi, amazinga okuzalwa aphantsi aya kuza emva kweminye imiba enzulu efana neyobuhlwempu, indlala, ukungcola okungcolileyo kunye nokukhululeka kwezifo kuye kwaqwalaselwa ngokufanelekileyo.
Ukongezelela ukugcina intsapho yakho encinci, cinga iinkqubo ezixhasa inkxaso yokulwa nendlala kunye nentlupheko, ukuphucula ukucoceka nococeko, okanye ukukhuthaza imfundo, ukucwangcisa iintsapho, kunye nempilo yokuzala kwilizwe eliphuhlisayo.
Sebenzisa Amanzi Amancinane-Ugcine Ucocekile
Ngokutsha, amanzi ahlambulukileyo kubalulekile ebomini-akukho mntu unokuphila ixesha elide ngaphandle kwalo-kodwa lenye yezona zinto ezinqabileyo kunye nezingozi kakhulu kwiplanethi yethu ekhulayo.
Amanzi ahlanganisa ngaphezulu kwe-70 ekhulwini lomhlaba, kodwa ininzi yile ityuwa yamanzi. Ukubonelela ngamanzi amancinci kuninzi kakhulu, kwaye namhlanje isithathu sabantu behlabathi abanako ukufikelela kumanzi acocekileyo okusela. Ngokutsho kweZizwe eziManyeneyo , iipesenti ezingama-95 zeedolophu emhlabeni jikelele ziyalahla ukuthuthwa kwamanzi amaninzi kumanzi abo. Akumangalisi ukuba i-80 pesenti yazo zonke izifo kumazwe asakhulayo zingadibaniswa namanzi angenamanzi.
Sebenzisa kuphela amanzi amaninzi okufunekayo, ungayichitha amanzi owasebenzisayo, kwaye ugweme ukwenza nantoni na engozini yamanzi .
Ukutya amafama asekuhlaleni asekuhlaleni kukuxhasa abalimi kunye nabathengisi basekuhlaleni kwenu kunye nokunciphisa inani lobushushu, ukungcoliseka komoya kunye nokukhutshwa kwegesi yokushisa okufunekayo ukuhambisa ukutya odlayo kwifama ukuya kwitheyibhile yakho.
Ukutya inyama yenyama kunye nokuvelisa kugcina izibulala-mfuyo kunye nezichumisi zamakhomikhali kwindawo yakho kunye nasemifuleni nasemifuleni.
Ukutya ngokufanelekileyo kuthetha ukutya inyama encinane, kunye nemveliso yezilwanyana ezimbalwa ezifana namaqanda nemveliso yobisi, okanye mhlawumbi akukho nto. Ingumcimbi wobulungiseleli bobutyebi bethu bokugqibela. Izilwanyana zaseFama zikhupha i-methane, igesi ephezulu yokushisa ebangela ukufudumala kwehlabathi , nokuphakamisa izilwanyana ekudleni kudinga amaxesha amaninzi umhlaba kunye namanzi kunokukhula kwezityalo.
Ibhokhwe isebenzisa iipesenti ezingama-30 zomhlaba womhlaba, kubandakanya iipesenti ezingama-33 zasemaphandleni emhlabeni wonke, esetyenziselwa ukuvelisa ukutya kwezilwanyana. Njalo xa uhlala phantsi kwisidlo esisekelwe kwisityalo endaweni yesidlo esisekelwe kwisilwanyana, ugcina ama-280 iigaloni zamanzi kwaye ukhusela naphi na kwi-12 ukuya kwe-50 inyawo zomhlaba kwiindawo zokungqothulwa kwamahlathi, ukugqithisa, nokugqithisa i-pesticide kunye nongcoliseko.
Ukugcina iMandla-noTshintsho kwiNamandla ahlaziyiweyo
Hamba, uhamba ngebhayisikili kwaye usebenzise izithuthi zikawonkewonke ngaphezulu. Shayela ngaphantsi. Ngeke kuphela ube nempilo kwaye uncede ukulondoloza imithombo yamandla enqabileyo, uya kusindisa imali. Ngokomsebenzi owenziwa yi-American Public Transportation Association, iintsapho ezisetyenziselwa ukuthutha izithuthi zinganciphisa iindleko zabo ngee-6,200 zamawaka ngonyaka, ngaphezu komyinge wase-US odla ngokutya rhoqo ngonyaka.
Kukho ezinye iindlela ezininzi onokugcina amandla-ukususa izibane nokukhupha izixhobo zombane xa zingasetyenziswanga, ukufaka endaweni yamanzi abandayo kushushu xa kunokwenzeka xa isimo sezulu sithintela iingcango zakho kunye neefestile, ukuba ungabi niselo okanye uphephe ngokweqile ikhaya lakho neofisi . Enye indlela yokuqala kukufumana ukuphicothwa kwamandla okukhululeka kummandla wakho wasekuhlaleni.
Xa kunokwenzeka, khetha amandla angaphinda ahlaziywe kwii-fuels. Ngokomzekelo, amancedo amaninzi kamasipala ngoku anikezela ngeendlela eziluhlaza okombane ukuze ufumane enye okanye wonke umbane wakho ngomoya , ilanga okanye enye imithombo yamandla evuselelekayo .
Ukunciphisa iCarbon Footprint yakho
Imisebenzi emininzi yoluntu-ukususela ekusebenziseni izityalo zamandla-mafutha ukuze kuveliswe umbane ukuqhuba iinqwelo-petroli-ezinamandla-kubangele ukukhutshwa kwegesi echaphazela ukuguquka kwemozulu.
Iingcali zenzululwazi sele zibona utshintsho olukhulu lwemozulu olubhekiselele kumathuba okuba nemiphumo emibi , ekunyuseni isomiso ezinokuthi zinciphise ukondla nokutya kwamanzi ekukhuphukeni kwamanqanaba olwandle eziza kugxininisa iziqithi nakwiindawo ezikulo lonxweme kwaye zidale izigidi zabantu ababalekileyo .
Ababala be-intanethi banokukunceda ukuba ulinganise kwaye unciphise i-carbon carprint yakho , kodwa ukutshintsha kwemozulu yinkinga yehlabathi efuna iisombululo zehlabathi, kwaye ngoku, ihlabathi lehlabathi liye lincinci ukufumana umgangatho onjalo kulo mbandela. Ukongeza ukwehliswa kwekhabhoni yakho yecarboni, mawaxelele ukuba amagosa akho karhulumente ayazi ukuba ulindele ukuba bathathe inyathelo kulo mbandela-kwaye bagcine uxinzelelo kude benze.
Amadolophu ase-US aHla amaninzi amaninzi ngeeNkqantosi zeTropical
Umhla woMthendeleko weNgqungquthela - I-Comedic Monologue yabaSebenzi boBantu